Wonke umuntu uyazi ukuthi umzimba womuntu-60% lamanzi. Ngakho, lokhu ukulinganisela amanzi kufanele zinakekelwe ngezindlela ezihlukene, ngoba izinqubo umzimba e izicubu zomzimba abazenzi kuphela khona izidakamizwa. Daily ingxenye uketshezi abantu, ngokuvamile kuhilela ngamanzi acwebileyo hhayi kuphela - ezifanele esikhundleni ayo, itiye noma lamanzi esiphethu. Uyini umkhiqizo wokugcina? Yini singaphansi ngezigaba? ? Kungakhathaliseki lamanzi esiphethu kunenzuzo enkulu ukuba umzimba?
Njengomthetho, inkampani linombono ukuthi Amanzi avela emithonjeni engu uyakwazi ukwenza kungenzeki: ke ephumula, upholisa, uthulisa, ekuphikisaneni ubudlova futhi ucasukile. Ingabe kuyiqiniso lokhu?
Umlando lamanzi esiphethu kunqunywa ukuba khona amakhulu ngamakhulu eminyaka. Lolu shintsho lwaqala ngesikhathi yokuthi ezikhathini zasendulo eduze imithombo ongcwele izizwe ngesiGreki bakhela engcwele kuze Asclepius unkulunkulu (wayengumuntu umxhasi imithi), futhi amaRoma wayekwenza ukwakhiwa amathempeli egameni Aesculapius. Okubalulekile, abavubukuli ngesiGreki wathola emanxiweni abangu, ngokusobala, Spas, ukwakhiwa okwenziwa ngekhulu lesithupha BC. Ngakho, izizukulwane ngezizukulwane ukudluliswa emasikweni adluliselwa ngomlomo ilandzelwe izakhiwo imilingo ngempela wamanzi amaminerali, okuyinto akazange adele ukulinga beat emhlabathini.
Inqubo kumiswa lamanzi esiphethu
вода дождевой природы, которая невообразимый отрезок времени назад ушла глубоко в недра земли. Amaminerali amanzi - amanzi emvula semvelo, lokuyindlela i obuphelele zicatshangwe kwesikhathi edlule, ngaya ekujuleni ezibilinini zomhlaba. Phakathi umkhiqizo Ukungena ngokusebenzisa izingqimba ezahlukene idwala ikhule ezimbotsheni therein ziyoncibilika izinto amaminerali enezici, ingabe zikhona. Ngakho, amazinga amanzi uhlamvu yemvelo okuyinto emanzini futhi kugcwele evulekile imithombo, amaminerali amanzi libhekene khona ukubunjwa yayo izinto Lokudabuka amaminerali. Ngaphezu kwalokho, ngesikhathi kumiswa umkhiqizo ufeza ababalulekile ukujula lamanzi esiphethu nesenzakalo: kulapho, ngcono ngezinga zokuhlanjululwa komkhiqizo kanye saturation yayo nge-carbon dioxide namaminerali, okuyinto eziye zatholakala buthelela ngokwemvelo njengoba edlulisa umkhiqizo ngokusebenzisa kumiswa imvelo umonakalo omkhulu kakhulu. , прежде всего, вода подземных источников. Ngokwesibonelo, lamanzi esiphethu -, ngaphezu kwakho konke, amanzi emithonjeni ngomshoshaphansi.
Izimfanelo lamanzi esiphethu kusukela enkantini
Ngokungangabazeki, kubalulekile ukuba sikwazi ukuhlukanisa phakathi ukuphuza amanzi amaminerali. Codex Alimentarius, main United Nations ejwayelekile, wanika ukudla ngamakhasimende Imininingwane ikhomba izici zayo idatha izindima ezilandelayo:
lamanzi esiphethu limbiwa kusukela zemvelo imithombo nemithombo ezakhiwe imishini. Ngalesi indlela ngokuphelele akufaki amathonya zangaphandle kokubili kwi Izakhiwo namakhemikhali umkhiqizo yemvelo amaminerali.
продукт, содержащий определенное количество солей, а также следовых веществ. Amaminerali amanzi - umkhiqizo aqukethe ethile nosawoti kanye trace izinto.
Inqubo uqoqa lamanzi esiphethu ikhiqizwa izimo ukuthi nakanjani siphele lesi isiqinisekiso ubumsulwa wakuqala ezingeni microbiological, kanye esitebeleni amakhemikhali ukwakheka yezingxenye eziqukethwe umkhiqizo.
izici ezithakazelisayo lamanzi esiphethu
достаточно капризный по своей природе продукт, требующий аккуратного обращения. lamanzi esiphethu - kuba impela ezingezwakali ngokwemvelo umkhiqizo edinga handling ngokucophelela. Kukhona umbono ukuthi amanzi yemvelo ethambile kakhulu iwayini eziyigugu. Futhi lokhu ngempela kunjalo, ngoba amanzi emthonjeni kumele isuswe ngokucophelela, ukuthi kunzima kakhulu ukukhiqiza, ngoba zekhwalithi ukujula kunendima okuyifezayo. emaphaketheni Mkhiqizo esitsheni esisebenzayo nesiphephile kakhulu - futhi akuwona neze umsebenzi olula, ngoba phakathi nalo msebenzi kumele kugcine izakhiwo esiyingqayizivele lamanzi esiphethu, okuyinto ekuqaleni ezihlanganiswe Mother Nature.
amanzi Yemvelo kahle amuncwa wumzimba: Uma kugwinywe ke qualitatively ihlangana juice esiswini, enikeza off the carbon dioxide futhi zikhuthaza umsebenzi secretory isitho. Yiqiniso, njengoba yalokhu "magic" isifiso isimo ngcono kakhulu. lamanzi esiphethu, inzuzo kanye nokulimala ukuthi ezibhekwa nethonya elizuzisa emzimbeni wethu. Yingakho, isibonelo, isiFulentshi, etafuleni lokudlela efakwa saziso ibhodlela lamanzi esiphethu, ngokuvamile eduze isinkwa.
Kuze kube manje, mineral yangempela buyadlondlobala eRussia. Leli qiniso kungaqinisekiswa ngokuthola izibalo ka iKomiti Yombuso Izibalo, ngenxa okuyinto inani izinhlobo lamanzi esiphethu kulo lonke izwe ilingana 700. Nokho, kukhona emuva lobuKhristu Emazweni asethuthukile kwezezimboni uma wehlulelwa umbandela lengenako ukusetshenziswa ukwenaba umkhiqizo sabantu. Ngokwezibalo, kwi-European manje akhawunti yikhulu amalitha amanzi amaminerali ngonyaka. I-Austrian uyakwazi baphuze 72 amalitha amanzi ngoba nenkathi efanayo, i-engumFulentshi - 80 wamalitha, isiNtaliyane - 116 amalitha kodwa okwemvelo amanzi ukusetshenziswa kwe-umhlali isilinganiso eJalimane, sifinyelela 129 amalitha ngonyaka. Futhi manje iqiniso eliyisisekelo: a Russian isakhamuzi iziphuzo 10 nje amalitha amanzi amaminerali unyaka wonke, ukuthi akuyona kancane umxhwele, nakuba babengamaphesenti isigamu ukuthi eSoviet Union. Kufanele kuzosungulwa ukuthi emakethe amanzi zemvelo eRussia balinganiselwa ku mayelana 1.2 billion. Amalitha ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, minyaka yonke kukhona ukukhula yalesi emakethe ngamaphesenti angu 10-15.
Namuhla, kukhona ezinye izinkomba ukuthi ziyisisekelo ngezigaba yamanzi engokwemvelo. Ngakho-ke, sanquma ukwaba lezi zinhlobo ezilandelayo umkhiqizo:
Kuye ezilamatshe aligugu slabomineralizirovannye, lamanzi esiphethu ka phansi, maphakathi, high usawoti brine futhi krepkorassolnye amanzi zemvelo.
Ngokombono balneology tableware elingalodwa, medical yezokwelapha-ithebula amaminerali amanzi.
Kuye ukubunjwa amakhemikhali: Bicarbonate, chloride, sulfate, i-sodium, i-calcium, magnesium lamanzi esiphethu okuxubile.
Imibandela lokushisa: abandayo kakhulu, abandayo, epholile, ngabandayo, efudumele, ashisayo (uma kungenjalo ukubizwa ngokuthi ezishisayo) kanye ebilayo (elinye igama - vysokotermalnye).
Ngokwe-degree asidi: hlangothi, ene-asidi kancane, ene-asidi, kakhulu esidi, kancane ane-alikhali, ane-alikhali.
amanzi Popular amaminerali namuhla
Kwabe sekuvela ukuthi, kuze kube manje ibanga lamanzi esiphethu zinothile. Ngakho, kuwukuhlakanipha yini ukuhlala cabanga ethandwa kakhulu imikhiqizo:
"Borjomi" kuyinto carbonic amanzi sodium hydrocarbonate. данного производителя заключается в лечении болезней печени, желудочно-кишечных заболеваний, мочевых путей, а также в предупреждении и нормализации последствий нарушения обмена веществ. Ukusetshenziswa umkhiqizi lamanzi esiphethu kufanele iphathe isifo sesibindi, izifo emathunjini, ngomgudu womchamo, kanye nokuvimbela futhi ukuzinza yemiphumela umzimba. umthombo lamanzi esiphethu itholakala Georgia (800 amamitha ngaphezu kolwandle).
"Essentuki" (4, 17, 20) - uhlelo amanzi amaminerali, lapho ilungu lokuqala - etafuleni umkhiqizo zokwelapha, kwesibili - yesithathu zokwelapha kanye - kukhethekele etafuleni. Lo mkhiqizo uhlukile kokubili ngokoMthetho okwelapha, futhi ukunambitheka. lamanzi esiphethu libhekene kwethonya ngokugxila olunzulu on wonke izinhlelo ukusebenza emzimbeni (kusukela encwadini "amaminerali amanzi siqaphe impilo" AA nazarov).
"Narzan" - amanzi Hydro carbonic-sulphate-calcium imvelaphi. Umthombo waso e Kislovodsk ngokuthi brand efanayo. Lo mkhiqizo kungaba ukwandisa esesuthi, ukuthuthukisa umsebenzi secretory wokugaya ukudla, andise Inkomba ambalwa of umchamo nokunye.
izinzuzo amanzi amaminerali kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka
Ezigabeni zokuqala lamanzi esiphethu ephawulwe Ukukhetha yayo njengoba primary ekwelapheni uya khona isiqondiso uveza ukusetshenziswa komkhiqizo. Ngakho-ke, ukudayiswa lamanzi esiphethu kuphela Pharmacy kungaba okufanelekile kakhulu. ? I lamanzi esiphethu kuyasiza empilweni yakho? Ezweni azikho idatha ezichaza inani eliphezulu elivunyelwe kanye izinga lamanzi esiphethu - konke ngamunye! Nokho, inqubo ukusetshenziswa lamanzi esiphethu kumele zithobele imithetho elandelayo: kubalulekile ukuba ngakususi lapho engayitholi njalo amanzi zemvelo futhi sisebenzise ngesikhathi ukulahlekelwa asebenzayo nosawoti emzimbeni kuphela. Ukuze sifinyelele nomphumela eyanelisayo, kufanele ufunde ngokucophelela ulwazi amalebuli bathambekele ukuthenga umkhiqizo izinga, futhi, uma kungenzeka, khetha lamanzi esiphethu oluxube odabuka yemvelo.
Sebenzisa lamanzi esiphethu elikhazimulayo
Kwatholakala ukuthi amanzi zemvelo benawo okuxubile uhlobo isakhiwo, okuyinto kanye izinto eziphila abakhuthele ekuthuthukiseni kakhulu umphumela oqabulayo ukusetshenziswa yayo:
Iron kuyinto isithiyo enamandla ekulweni nesifo sokuntuleka kwegazi.
Iodine kuholela ukusebenza evamile yegilo indlala.
Calcium iyithuluzi elihle ngenxa yokulondoloza ion ibhalansi umzimba, kanye nemiphumela ezuzisayo phezu inqubo igazi ekunqandeni.
Magnesium kuyinto Umlawuli ngokuphawulekayo amandla umzimba carbohydrate, ngaphezu, kunomthelela ukusebenza evamile isimiso sezinzwa.
Sodium - ezinhle ukwesekwa umfutho wegazi usuke evamile.
Potassium kubalulekile umsebenzi inhliziyo nezinso.
Fluorine iyona ebaluleke kakhulu amathambo namazinyo, ngaphezu kwalokho, kuyasiza kakhulu amantombazane abakhulelwe.
lamanzi esiphethu ukulinyazwa emzimbeni womuntu
: так ли это? lamanzi esiphethu kuyingozi kwezempilo: Lokhu kuyiqiniso? Impendulo yalo mbuzo sisobala: kuwukuthi izici ambalwa kanye qualitative ukusetshenziswa kwalo mkhiqizo. Ngakho, imvamisa yokwamukela amaminerali uhlobo ekwelapheni kanye umthamo nsuku zonke zincike ukwakheka umkhiqizo nekhwalithi, ngokwemvelo, ku izincomo udokotela. Ngokuvamile, lamanzi esiphethu ukuphuza imizuzu 15-30 ngaphambi kokudla ukudla esimweni ezingeni eliphansi uketshezi esiswini kanye imizuzu 45-60 at uketshezi eyanele. Uma uketshezi yomzimba luyanda, kufanele uphuze amanzi amaminerali ingxenye yehora ngaphambi kokudla.
Kubalulekile ukwazi ukuthi namuhla evame kakhulu yokufakelwa kwamanzi gasification enikeza ngokugcwele isizathu nokulahlekelwa impahla oqabulayo umkhiqizo ngokuhamba kwesikhathi. Nokho, ngisho lapha kukhona workaround: ukuqeda carbon dioxide wavula ibhodlela kufanele ayonyakaziswa kahle, bese amagesi yokufakelwa shabalala. Kungenjalo silnogazirovanny bakwazi baphuze ekufukuleni isici ngoba asidi esiswini.
Ukukhetha lamanzi esiphethu - umsebenzi okudinga indlela ngamunye
? Yikuphi lamanzi esiphethu okuhle empilweni yakho? Impendulo yalo mbuzo iyinkimbinkimbi, ngoba kanye izici zomzimba womuntu, izakhiwo ngabanye lamanzi esiphethu. It kuvela ukuthi lamanzi esiphethu is zemvelo - kuba iqoqo ezithile oncibilikile ngamanzi ion, ngakho ukwakha isakhiwo yokufakelwa kungaba kalula, kukhona intando efanele ulwazi. A engozini ethile yenziwa manga kuphela anolaka (amanzi, usawoti, baking soda), okuyinto zinhle, cishe iqedwe.
Lapho ekhetha umkhiqizo, kufanele siqaphelisise izinto ezifana ubuqotho emabhokisini ubumsulwa ibhodlela futhi okuqukethwe ukungcola emanzini. Uma ngesikhathi ukusetshenziswa amaminerali wazizwa evutha umphumela noma okunoshukela kakhulu iphunga chemical nemvelo, kungcono ukuqeda umkhiqizo. Ngokuvamile, amanzi zemvelo it is ifanelekile ukuthola efakazelwe efundwayo kuphela, isibonelo, Pharmacy.
Izithelo candied. Calorie nezakhiwo
Bradley Steven Perry: Biography futhi Filmography umlingisi abasha
Kazan Energy University: amandla kanye nezindleko ukuqeqeshwa
Umuthi 'ALARM 2' abantu